“Dɛn na Yehowa Hwehwɛ Fi Wo Hɔ?” | Bɛn Onyankopɔn
WƆN a wɔpɛ sɛ wɔsom Yehowa ma ɛsɔ n’ani no, dɛn na ɔhwehwɛ fi wɔn hɔ? Ɔpɛ sɛ yɛyɛ yɛn biribiara frenkyemm a yenni mfomso biara ma enti nnipa a yɛnyɛ pɛ rentumi nsom no yiye anaa? Anaasɛ nea yɛn ahoɔden betumi nkutoo na ɔhwehwɛ fi yɛn hɔ? Sɛ yebetumi de anigye asom Onyankopɔn a, yehia saa nsɛmmisa yi ho mmuae. Momma yɛnhwɛ sɛnea odiyifo Mika bɔɔ nea Onyankopɔn hwehwɛ fi yɛn hɔ no mua.—Kenkan Mika 6:8.
“Waka nea eye akyerɛ wo.” Ɛho nhia sɛ yɛbɔ yɛn tirim ka nea Onyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ. Waka nea ɔpɛ sɛ yɛyɛ no pefee wɔ Bible mu. Nea Onyankopɔn hwehwɛ fi yɛn hɔ no yɛ ade a “eye.” Ɛrentumi nyɛ adebɔne. “Onyankopɔn ne dɔ,” enti ɔpɛ yɛn yiye. (1 Yohane 4:8; 5:3) Sɛ yedi n’ahyɛde so a, ɛnyɛ ɔno nko na n’ani gye na mmom yɛn nso ɛboa yɛn.—Deuteronomium 10:12, 13.
“Dɛn na Yehowa hwehwɛ fi wo hɔ?” Ɛyɛ mfomso sɛ Onyankopɔn bɛhwehwɛ biribi afi yɛn hɔ anaa? Dabida! Ɔno ne nkwa nsuti, na ɔno ara nso na ɔkora nkwa so, enti ɔno na ɛsɛ sɛ yetie no. (Dwom 36:9) Ɛnde, dɛn na ɔhwehwɛ fi yɛn hɔ? Mika de nsɛm abiɛsa bi bɔ nea Onyankopɔn hwehwɛ fi yɛn hɔ no mua. Abien a edi kan no de, ɛtɔ kɔ sɛnea yɛnyɛ afoforo so, na nea ɛto so abiɛsa no yɛ yɛne Onyankopɔn ntam asɛm.
‘Di asɛntrenee.’ Nhoma bi kyerɛkyerɛ mu sɛ Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “asɛntrenee” no kyerɛ sɛ “yɛne nnipa nyinaa bɛtena yiye a nsisi biara nnim.” Onyankopɔn pɛ sɛ yɛne afoforo tena yiye sɛnea ɔno ne mmara kyerɛ. Sɛ yɛanyɛ animhwɛ, na mmom yɛyɛ adepa di obiara nokware a, na ɛkyerɛ sɛ yedi asɛntrenee. (Leviticus 19:15; Yesaia 1:17; Hebrifo 13:18) Sɛ yɛne afoforo di no asɛntrenee so a, ɛbɛma wɔn nso ne yɛn adi no asɛntrenee so.—Mateo 7:12.
‘Dɔ ayamye.’ Onyankopɔn nka sɛ yɛnyɛ ayamyefo kɛkɛ na mmom ose yɛnnɔ ayamye. Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “ayamye” (che′sedh) no, wotumi san kyerɛ ase “adɔe.” Bible ho ɔbenfo bi ka sɛ: “Yɛrentumi nkyerɛ [che′sedh] ase ɔdɔ, mmɔborɔhunu anaa ayamye; ɛnyɛ saa su yi mu biara, na mmom ɛyɛ abiɛsa no nyinaa a wɔaka abom.” Sɛ yɛdɔ ayamye a, obi nka nkyerɛ yɛn ansa na yɛayɛ afoforo yiye; yɛde anigye boa nnipa a wohia mmoa. Yɛyɛ nneɛma boa afoforo saa a, ɛma yɛn ani gye.—Asomafo Nnwuma 20:35.
‘Brɛ wo ho ase ne wo Nyankopɔn nnantew.’ Bible mu no, sɛ wɔka “nantew” a, ɛkyerɛ sɛ “obi bɛfa ɔkwan pɔtee bi so ayɛ n’ade.” Sɛ yɛde abrabɔ ho akwankyerɛ a Onyankopɔn de ama wɔ Bible mu no yɛ adwuma a, na ɛkyerɛ sɛ yɛne no renantew. Ɛsɛ sɛ ‘yɛbrɛ yɛn ho ase’ na yɛatumi afa saa kwan no so. Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa? Sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ma Onyankopɔn a, ɛma yehu yɛnsɛ hwee wɔ n’anim na yehu sɛ yɛnyɛ pɛ. Enti sɛ wɔka sɛ ‘brɛ wo ho ase ne obi nnantew’ a, ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wunya adwene a ɛfata wɔ nea ɔhwehwɛ fi wo hɔ ne nea wubetumi ayɛ ho.
Ɛyɛ anigye paa sɛ Yehowa nhwehwɛ nea ɛboro yɛn ahoɔden so da. Sɛ yɛyɛ nea yebetumi biara de som no a, n’ani gye. (Kolosefo 3:23) Onim sɛ yɛnyɛ pɛ. (Dwom 103:14) Sɛ yɛn nso yɛbrɛ yɛn ho ase na yehu sɛ yɛnyɛ pɛ a, ɛma yɛn ani gye sɛ yɛne no renantew. Adɛn nti na wunsua sɛnea wubetumi afi ase ne Onyankopɔn anantew? Sɛ woyɛ saa a, obehyira wo pii.—Mmebusɛm 10:22.
November Bible akenkan: